I-NextMapping | Indawo Yokusebenzela Yesikhathi Esizayo Yi-Hybrid Of Remote and In Office Workers
Sizwile izinkulumo eziningi mayelana ne- 'okusha okujwayelekile' selokhu kwaqala ubhadane. Empeleni akekho owaziyo ngempela ukuthi lokho kujwayelekile okusha kuzobukeka kanjani.
Njengamanje sibhekene nenguquko kwezenhlalo. Ubhadane ludala ukuthi abasebenzi baphinde bahlole ukuthi umsebenzi usho ukuthini kubo ngawodwana.
Abaqashi bazivumelanise nomsebenzi kusuka eqinisweni lasekhaya ngokushesha. Baye bathola ukuthi kungenzeka futhi kuyazuzisa nokuba nezisebenzi ezikude.
Ngaphambi kukaCovid19 abasebenzi abaningi bebecela i ukwanda komsebenzi okude .
Ezimweni eziningi abaqashi babephendula esicelweni somsebenzi esikude bethi akunakwenzeka.
Manje nasesikhathini esizayo iqiniso ukuthi umsebenzi wokude ulapha ukuhlala.
Ucwaningo ithole ukuthi izingxenye ezimbili kwezintathu zabasebenzi okukhulunywe ngazo zizizwa zikhiqiza kangcono ukude. Umbiko weLenovo uthole ukuthi ama-52% alabo okuxoxwe nabo babona sengathi ukusebenza ekhaya ngempela 'kuyinto ejwayelekile'.
Enye yezinselelo ezinkulu kubasebenzi abasebenza ukude ukubhekana nokuphazamiseka emakhaya kanye nengqondo izinselele zenhlalakahle.
Empeleni okujwayelekile okusha indawo yokusebenza yesikhathi esizayo kuyinhlanganisela yabasebenza kude nabasebenza ehhovisi.
Kukhona ithuba njengamanje lokuthi abaholi benze amasu futhi bahlele manje ukuthi indawo yokusebenza eyi-hybrid izobukeka kanjani.
Ngakho-ke izinkampani zingahlelela kanjani indawo yokusebenza eyi-hybrid kuqiniso lobhadane lokuthunyelwe? Nayi eminye imibono:
Abaholi benkampani banethuba njengamanje lokuqoqa ucwaningo lwabo kanye nedatha yokuthi abasebenzi babo baqhuba kanjani njengamanje. Lokhu kungafaka phakathi ukuhlola kanye nokuvota kokuthi abasebenzi bazizwa kanjani besebenza kude.
Izinkampani esezivele zinabasebenzi basezikhundleni nabasebenza kude kunethuba lokuhlola ukuthi kuhamba kanjani. Abaholi bangaqoqa idatha ye-anecdotal kokukodwa kungxoxo eyodwa mayelana nokuthi yini esebenzayo nokuthi yini engasebenzi.
Ngomthelela womphakathi wobhadane kubalulekile ukuthi abaholi bazwele ekuphenduleni kwabasebenzi babo kanye namaqiniso. Isibonelo umzali osekhefini lomzali angafuna ukusebenza ukude ngama-60% wesikhathi nasehhovisi ama-40% esikhathi. Kubalulekile ukuqoqa idatha yomuntu ngamunye yokuthanda ukuze wakhe izinketho ezingcono kakhulu kubo bonke abasebenzi.
Indawo ekahle yokusebenza e-hybrid izocabangela ibhalansi elifanele lokuhlangana kwemihlangano mathupha ngokuqhathaniswa. Ukwakha izindlela zokusekela izinqumo ezungeze ukuthi bahlangane nini mathupha noma cishe kungasiza wonke umuntu ukuthi abe ekhasini elilodwa.
Indawo yokusebenza eyi-hybrid idinga indlela entsha yokubuka isilinganiso sokusebenza. Kukhona ithuba lokuhlonza amamethrikhi amasha wokulinganisa ukusebenza kwabasebenzi kusakhiwo se-hybrid. Ngibikezela ukuthi kanye ne-AI, idatha yesikhathi sangempela, i-AI yokuhlaziya umhlangano ukuthi kuzoba nedatha ethe xaxa yokukhomba impumelelo yesisebenzi. Kodwa-ke isilinganiso sobuchwepheshe bokusebenza akusona ukuphela kwenkomba yokunikela kwesisebenzi. Kudingeka ukuthi kube nokwanda kokubuyekezwa kontanga ngokuya ngokuthi umsebenzi unikela kanjani eqenjini noma empumelelweni yamakhasimende.
Akungabazeki ukuthi lapho siphokophele khona kubhekiswe ku-a 'okujwayelekile okulandelayo' lokho kuzokwakhiwa futhi kuholelwe okuthandwa ngabasebenzi.
Izinkampani zizodinga ukuzivumelanisa ngokushesha kakhulu nalokho abasebenzi abakufunayo nabakudingayo. Njengoba phambilini bekungumqashi owabeka imigomo yokuziphatha kanye nemithetho yohlelo ngicabanga ukuthi yisisebenzi esizonquma ukuthi umsebenzi usuqedile nini, wenziwa kanjani nendawo ekahle yokwenza lowo msebenzi.
Sicela ukhetheCanadaI-united statesAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosI-Congo, iDemocratic Republic of theI-Congo, i-Republic of theCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusI-Czech RepublicDenmarkDjiboutiDominicai-Dominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGreenlandGrenadaGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasi-Hong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatie-North KoreaINingizimu KoreaKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsE-New ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalE-Puerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé and PríncipeI-Saudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaIningizimu AfrikaSpaini-Sri LankaSudanSudan, SouthSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaigalikuniTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineI-United Arab Emiratesi-United KingdomUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USYemenZambiaZimbabwe